Android အတွက် အကောင်းဆုံး Processor ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Huawei ရဲ့ Kirin 980
23 Jul 2018 . 11:46 AM
Huawei ဟာ မနှစ်တုန်းက Kirin 970 Processor ကို ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုထားတဲ့ Huawei Mate 10 Pro ဖုန်းကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ ဒီနှစ်မှာ ထွက်ရှိမယ့် Huawei Mate 20 Pro စမတ်ဖုန်းမှာ အဆိုပါ Kirin 970 Processor ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Kirin 980 Processor ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Huawei က လာမယ့် စက်တင်ဘာလမှာ Huawei Mate 20 Pro စမတ်ဖုန်းကိုBerlin ၊ Germany မှာ ပြုလုပ်မယ့် IFA 2018 ပွဲမှာ ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါ Mate 20 Pro ဖုန်းနဲ့အတူ Kirin 980 Processor ကိုပါ တွေ့မြင်လာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Kirin 980 Processor ဟာ Octa Core Processor အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ Taiwan Semicoductor Manufacturing Company (TSMC) ရဲ့ 7nm Architecture ကို အသုံးပြုသွားမယ့် Processor တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဒီနှစ်မှာ Apple iPhone အသစ်တွေရဲ့ A12 Chipset ပြီးရင် ဒုတိယမြောက် 7nm Processor တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
Kirin 980 Processor ဟာ Cotex A77 Cores ၄ လုံးနဲ့ Cortex A55 Cores ၄ လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Clock Speed အနေနဲ့ 2.8GHz အထိ ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု Kirin 980 Processor မှာ Huawei ရဲ့ ပထမဆုံးသော Mali GPU မဟုတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် GPU ကိုလည်း ထည့်သွင်းလာမယ်လို့ ယူဆရပြီး အဆိုပါ Huawei ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် GPU ဟာ လက်ရှိ Snapdragon 845 Processor မှာ ပါဝင်တဲ့ Adreno 630 Processor ထက် ၁ဆခွဲပိုပြီး သာလွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Modem ပိုင်းအနေနဲ့လည်း Huawei ဟာ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး LTE Cat. 19 ကို Support ပေးပြီး Maximum Download Speed 1.6Gbps အထိ ရရှိတဲ့ Balong 765 Modem ကို ထုတ်ပြခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် အခု Huawei Mate 20 Pro ဖုန်းမှာ အဆိုပါ Modem ကို ထည့်သွင်းလာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် AI နဲ့ Machine Learning စနစ်တွေအတွက် Kirin 970 Processor မှာ သီးသန့် NPU Unit တစ်ခုပါဝင်ခဲ့သလိုပဲ အခု Kirin 980 Processor မှာလည်း Second Generation NPU 1M Unit ကို ထည့်သွင်းလာမှာဖြစ်ပြီး5Trillion Calculations Per Watt အထိ တွက်ချက်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု AI ပိုင်းတွက်ချက်မှုအပေါ်ကို မူတည်ပြီး Dual ၊ Quad နဲ့ Octa Core Versions တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခု Kirin 980 Processor မှာလည်း Huawei ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ GPU Turbo နည်းပညာလည်း ပါဝင်လာဦးမှာ သေချာနေပါတယ်။
အခု Huawei ရဲ့ Kirin 980 Processor ကို Huawei Mate 20 ၊ Mate 20 Pro ဖုန်းတွေက ပထမဆုံး အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက Antutu Benchmark 365,819 Marks အထိ ရရှိတယ်လို့ သတင်းပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် လက်ရှိ Qualcomm Snapdragon 845 ၊ Samsung Exynos 9810 Processor တွေထက် သိသိသာသာကို ပိုပြိး မြန်ဆန်လာတဲ့ Processor တစ်ခုဆိုတာကတော့ ငြင်းလို့ မရလောက်ပါဘူး။
Huawei ဟာ မနှဈတုနျးက Kirin 970 Processor ကို ပထမဆုံးစတငျအသုံးပွုထားတဲ့ Huawei Mate 10 Pro ဖုနျးကို စတငျမိတျဆကျခဲ့ပွီးတော့ ဒီနှဈမှာ ထှကျရှိမယျ့ Huawei Mate 20 Pro စမတျဖုနျးမှာ အဆိုပါ Kirin 970 Processor ကို အဆငျ့မွှငျ့တငျထားတဲ့ Kirin 980 Processor ကို တပျဆငျအသုံးပွုလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
Huawei က အခု Huawei Mate 20 Pro စမတျဖုနျးကို လာမယျ့ စကျတငျဘာလမှာ Berlin ၊ Germany မှာ ပွုလုပျမယျ့ IFA 2018 ပှဲမှာ ကွညောသှားမှာဖွဈပွီးတော့ အဆိုပါ Mate 20 Pro ဖုနျးနဲ့အတူ Kirin 980 Processor ကိုပါ တှမွေ့ငျလာရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
အခု Kirin 980 Processor ဟာ Octa Core Processor အမြိုးအစားဖွဈပွီးတော့ Taiwan Semicoductor Manufacturing Company (TSMC) ရဲ့ 7nm Architecture ကို အသုံးပွုသှားမယျ့ Processor တဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဒီနှဈမှာ Apple iPhone အသဈတှရေဲ့ A12 Chipset ပွီးရငျ ဒုတိယမွောကျ 7nm Processor တဈခုဖွဈလာမှာပါ။
Kirin 980 Processor ဟာ Cotex A77 Cores ၄ လုံးနဲ့ Cortex A55 Cores ၄ လုံးပါဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ Clock Speed အနနေဲ့ 2.8GHz အထိ ရှိမယျလို့ သိရပါတယျ။ အခု Kirin 980 Processor မှာ Huawei ရဲ့ ပထမဆုံးသော Mali GPU မဟုတျတဲ့ ကိုယျပိုငျ GPU ကိုလညျး ထညျ့သှငျးလာမယျလို့ ယူဆရပွီး အဆိုပါ Huawei ရဲ့ ကိုယျပိုငျ GPU ဟာ လကျရှိ Snapdragon 845 Processor မှာ ပါဝငျတဲ့ Adreno 630 Processor ထကျ ၁ဆခှဲပိုပွီး သာလှနျမှာဖွဈပါတယျ။
Modem ပိုငျးအနနေဲ့လညျး Huawei ဟာ ဒီနှဈအစောပိုငျးမှာ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး LTE Cat. 19 ကို Support ပေးပွီး Maximum Download Speed 1.6Gbps အထိ ရရှိတဲ့ Balong 765 Modem ကို ထုတျပွခဲ့ဖူးတဲ့အတှကျ အခု Huawei Mate 20 Pro ဖုနျးမှာ အဆိုပါ Modem ကို ထညျ့သှငျးလာနိုငျဖှယျရှိပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ AI နဲ့ Machine Learning စနဈတှအေတှကျ Kirin 970 Processor မှာ သီးသနျ့ NPU Unit တဈခုပါဝငျခဲ့သလိုပဲ အခု Kirin 980 Processor မှာလညျး Second Generation NPU 1M Unit ကို ထညျ့သှငျးလာမှာဖွဈပွီး5Trillion Calculations Per Watt အထိ တှကျခကျြလာနိုငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အခု AI ပိုငျးတှကျခကျြမှုအပျေါကို မူတညျပွီး Dual ၊ Quad နဲ့ Octa Core Versions တှနေဲ့ အလုပျလုပျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အခု Kirin 980 Processor မှာလညျး Huawei ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျတဲ့ GPU Turbo နညျးပညာလညျး ပါဝငျလာဦးမှာ သခြောနပေါတယျ။
အခု Huawei ရဲ့ Kirin 980 Processor ကို Huawei Mate 20 ၊ Mate 20 Pro ဖုနျးတှကေ ပထမဆုံး အသုံးပွုလာမှာဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးတုနျးက Antutu Benchmark 365,819 Marks အထိ ရရှိတယျလို့ သတငျးပေါကျကွားခဲ့တဲ့အတှကျ လကျရှိ Qualcomm Snapdragon 845 ၊ Samsung Exynos 9810 Processor တှထေကျ သိသိသာသာကို ပိုပွိး မွနျဆနျလာတဲ့ Processor တဈခုဆိုတာကတော့ ငွငျးလို့ မရလောကျပါဘူး။